Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Italy » Ihe ngosi cha cha nke Rome dell'Aurora na-aga na ngọngọ mkpọ ahịa
Casino dell'Aurora - ebe obibi naanị ihe mkpuchi elu ụwa nke Caravaggio sere, nke nwere atụmatụ atụmatụ ruru nde euro 471 ($ 540), bụ otu n'ime ụlọ kachasị ọnụ ahịa etinyere n'ahịa.
2,800-square-mita (30,000 square feet) Casino di Villa Boncompagni Ludovisi, makwaara dị ka Villa Aurora, nke dị nso Rome'S Via Veneto, na-aga n'ihu na ngọngọ taa na "ahịa ahịa nke narị afọ."
Casino dell'Aurora - ebe obibi naanị ihe mkpuchi elu ụwa nke Caravaggio sere, nke ọnụ ahịa ya ruru nde euro 471 ($ 540), bụ otu n'ime ụlọ kachasị ọnụ ahịa etinyere n'ahịa..
Ọtụtụ n'ime uru ya bụ ihe osise ya sitere n'aka ndị na-ese Baroque Italy Caravaggio na Guercino, yana akụ omenala ndị ọzọ.
Guercino na-ekpuchi ọtụtụ ọnụ ụlọ, gụnyere nke na-egosi Aurora, chi chi ọbụbọ nke ndị Rom. Aha ụlọ ahụ sitere na ọrụ a, ebe ọ na-achọ nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ihe kacha dị oké ọnụ ahịa nke Villa ahụ bụ ihe osise Caravaggio na-egosi Jupiter, Neptune, na Pluto. Na azụ na 1597 wee chọpụta ya na 1968, ọ bụ naanị ihe osise a ma ama na-ese n'uko ụlọ. Naanị nke a bụ ihe ruru nde euro 310.
Ewezuga frescoes dị oké ọnụ ahịa, Casino dell'Aurora nwere akụkọ ihe mere eme nke ndị ọbịa a ma ama kemgbe ọtụtụ narị afọ, dị ka onye edemede America na Britain bụ Henry James na onye Russia na-ede egwú Pyotr Tchaikovsky.
Ewubere cha cha dell'Aurora na 1570 ma bụrụ nke ezinụlọ Ludovisi kemgbe mmalite 1600s. Mgbe ọnwụ nke onye nwe ya ikpeazụ, Prince Nicolo Boncompagni Ludovisi, na 2018, ọ ghọrọ isiokwu nke esemokwu ihe nketa ogologo oge n'etiti ụmụ nwoke atọ sitere na alụmdi na nwunye mbụ ya na nwunye ya nke atọ, onye America mụrụ Princess Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi. Nke ikpeazụ ejirila ihe ka ukwuu n'ime afọ 20 gara aga rụzigharị ihe onwunwe ahụ.
Ụlọ ikpe ndị ahụ mechara kpebie na a ga-ere ụlọ ahụ ire ere. Onye zụrụ villa, nke na-echebe ya Italian iwu ihe nketa omenala, a ga-amanye imefu nde euro 11 ọzọ na mweghachi.
Edebere ntinye ego maka ụlọ na €353 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 401).
Ọzọ na: Cha cha
Ọzụzụ Tai Chi nwere ike ime ka ọrịa Parkinson dịkwuo mma
Ọrịa COVID na-eduga na ọnụ ahịa ụlọ nkwari akụ na-agbagwoju anya